Hira fisaorana lehibe China Manufacturer
Description:Hira fisaorana lehibe,Kitaposin'ny Glass for Grinding and Blasting,Porofom-bato marevaka avo lenta
Home > Products > Fanosoram-biriky > Hira fisaorana lehibe
Porofom-bato matevina (fipoahana sy fitsanganana)
Mitaky rivotra amin'ny rivotra ny rivotra ary ampiasaina amin'ny rindrina fitaratra toy ny metaly, amin'ny alalan'ny haingam-pandeha sy haingam-pandeha amin'ny faritra. Ny vokatra aorian'ny fipoahana dia afaka manafoana ny adin-tsainy, manalava ny fiainana marefo, ary manatsara ny fahaiza-manaony ho an'ny korontana manelingelina.
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Ny hafa: 2.0%
Araraoty isan-jato: 85 pct. Minimum
Ny endriky ny endriky ny akoho sy menaka tsy misy fotony
Gravity manokana 2.4 2.6 g / CC
Mora voavolavola ny rano
pH (tsy misy rano fotsiny) n. A.
Ny toetra hafa nanalefahana ny teboka 846 ° C
Fivarotan-tenan'ny micro: 630kg / mm2
Modely momba ny vokatra
Afaka manamboatra labozia vita amin'ny ranomandry hatramin'ny 7000mikrons ka hatramin'ny 44 microns
Ireo vokatra ireo dia manana fomba amam-panazavana lehibe: Mamolavola karazana fiantraikany mahavokatra, famolavolana, fitaratra, rubber sy plastika, fanodinana metaly ary fanindronana. Esory tsikelikely ny tebiteby, ampitomboy ny fiainana marefo ary ampitombo ny fanamafisana ny fihenjanana. Ohatra, ny fiaramanidina fiaramanidina fiara, vane, shaft, fiaran-dalamby, loharano sy angona maro samihafa, sns. Manadio sy manala ny tendron'ny tsipìka sy ny fihoaram-bolo eo amin'ny takelaka fiatoana sy ireo transistoren marevaka vita amin'ny plastika alohan'ny hidiram-bolam-borona. Ny tara-pahatapitr'ilay rindrina ho an'ny fitaovana ara-pahasalamana ara-medikaly sy ny fiara dia manadio electromotor ary ny ampahany toy ny loop, biriky elektrika ary rotora mandritra ny famerenana mavesatra dia manala sy manala ny tavoahangy metaly sy ny tavoahangina metaly tsy misy fangarony. Azo ampiasaina amin'ny fihanaky ny fitrandrahana sy fanodikanana ny ampahany amin'ny fitaovana hosodoko.
Ny jiro vita amin'ny vera misy kilaometatra vita amin'ny soda dia misy ny fiarovana ara-tsimiao tsara, ny hery entina matevina ary ny fahasosorany,
Ny fitaovana ampitahaina amin'ny fitaovam-pitaterana hafa dia manana ny fahamendrehana lehibe.
Tsy afaka mandoto ny metaly fanodinana.
Azonao atao ny manatsara ny fanadiovana, ataovy ny fitaovana fanontana hamerenana amin'ny laoniny voalohany, madio.
Ireo kofehy fitaratra ireo dia matetika ampiasaina ho mpanaparitaka, mametaka mediam-pamokarana sy ranon-javatra amin'ny lamba maina, loko, akanjo ary hafa.
Fampiharana ny marevaka matevina
Hira fisaorana lehibe Kitaposin'ny Glass for Grinding and Blasting Porofom-bato marevaka avo lenta Kitapo matevina lehibe Kitapo mainty lehibe Hevitra Hametraka hevitra Fitaovana fanoratana lalana Pejy fanalehibe ny zoron-trano lehibe